Barcelona Oo Doonaysa In Ay Dardar Galiso La Soo Wareegista Da’yarka Borussia Dortmund Ee Ousmane Dembélé Iyo Wakiilkiisa Oo Xaalada Ka Hadlay. - Laacib.net
Barcelona Oo Doonaysa In Ay Dardar Galiso La Soo Wareegista Da’yarka Borussia Dortmund Ee Ousmane Dembélé Iyo Wakiilkiisa Oo Xaalada Ka Hadlay.
Wargayska caanka ah ee dalka France ka soo baxa ee L’Équipe ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Barcelona ay dardar galinayso sidii ay Borussia Dortmund uga la soo wareegi lahayd da’yarka sida wayn loo qiimeeyo ee Ousmane Dembélé.
Wargayska L’Équipe ayaa sheegay in maamulka Barcelona ay doonayaan in saxiixa Ousmane Dembélé ay u dhamaystiran sida ugu deg dega badan ee ugu suurtogalsan, waxayna diyaar u yihiin in marka uu ka soo laabto fasaxa uu ku maqan yahay in ay la soo saxiixdaan.
Warkan ayaa sheegay in uu jiro xidhiidh u dhexeeya agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Roberto Fernandez iyo wakiilka Ousmane Dembele ee Moussa Sissoko. Xidiga kooxda Tottenham iyo xulka qaranka France ee Moussa Sissoko ayaa wakiil ka ah da’yarkan ree France waxayna xidhiidh yeesheen Robert Fernandez oo ka shaqaynaya sidii uu da’yarkan Camp Nou u soo gaadhi lahaa.
Moussa Sissoko oo ka hadlay mustaqbalka Ousmane Dembele ayaa yidhi: “Ousmane hadda waxa uu ku jiraa fasax, waxaanu xaalada ka wada xaajoon doonaa marka uu soo laabto. Anigu ma doonayo in aan ka hadlo wax kasta oo laga yidhi mustaqbalka Ousmane”.
Moussa Sissoko oo qiraya xiisaha kooxaha waa wayn ee Ousmane ayaa yidhi: ” Waanu ognahay in xiiso uga imanayo kooxaha waa wayn ee Yurub taasina waa nooc macquul ku ah bandhigiisa”.
Ousmane Dembele ayaa dhawaan xaqiijiyay in xiligan oo kale xagaagii hore ay xidhiidh sameeyeen isaga iyo agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez balse Barcelona ayaa ka gaabisay in ay xidigan ku heli kartay qiimo aad u yar marka la barbar dhigo qiimaha ay hadda Dortmund ku iibin karto.
19 sano jirkan Ousmane Dembele ayay Borussia Dortmund kula soo wareegtay 15 milyan oo euros oo kaliya balse markan waxay ku qiimaynaysaa ilaa 90 milyan oo euros waxayna Dortmund qiimahan qaaliga ah u dul dhigtay madaxa Ousmane Dembele sidii ay Barcelona uga ceshan lahayd.
Barcelona ayaa bartilmaameedka ugu wayn xagaagan ka dhiganaysa saxiixyada Marco Verratti iyo Ousmane Dembele kuwaas oo haddii ay hesho kooxdeeda horumarin wayn ku samayn kara isla markana uu macalinka cusub ee Valverde uu ku hawl gali doono.